प्रहरी मेसमा पुगेर गृहमन्त्रीले हामीलार्इ नी खाना छ भनेर साेधेपछि.......
काठमाडौँ, ७ चैत । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आज प्रहरीको मेसमा बसेर जवानसँगै खाना खानुभएको छ ।
बिहान १०ः१५ बजे महानगरीय प्रहरी वृत्त, अनामनगरमा आकस्मिक रुपमा निरीक्षण गर्न पुग्नुभएका गृहमन्त्री बादलले वृत्तको उजुरी शाखा, महिला शाखा, ब्यारेक, कैदी कक्ष, भण्डारण कक्षलगायत निरीक्षण गर्नुभएको थियो । त्यसपछि उहाँले मेसको पनि निरीक्षण गर्ने भन्दै वृत्तको मेसतर्फ लाग्नुभयो । त्यहाँ खाना खाइरहेको प्रहरी हतारहतार उठ्न खोज्दै थिए तर गृहमन्त्री थापाले बसेर खाइराख्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।
सो लगत्तै भान्सामा पुगी उहाँले, “हामी पनि यहीँ खाना खान्छौँं, खाना पुग्छ नि” भनेर प्रश्न गर्नुभयो । उहाँको प्रश्नबाट अकमकिएका प्रहरीले शुरुमा त विश्वास मानेनन् । ‘पुग्छ हजुर’ भनेर जवाफ दिए । “त्यसो भए हामीलाई पनि खाना ल्याउनुहोस्” भन्दै गृहमन्त्री थापा खाना खाइरहेका प्रहरी जवानसँगै बसेर खाना खानुभयो । दाल, भात, आलु र गोभीको तरकारी, साग र आलुका अचार खानमा पाकेको थियो । गृहमन्त्री आउने जानकारी नपाएकै कारण वृत्तको प्रहरीले सलामी समेत अर्पण गर्न पाएनन् ।
सो अवसरमा उहाँले जनताको जिउ, धनको सुरक्षाका लागि दत्तचित्त भएर लाग्न वृत्तका प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभयो । सुरक्षा निकायका अन्य अंग भन्दा नेपाल प्रहरीको रासनमा विभेद् रहेकोबारे आफू जानकार रहेको बताउँदै गृहमन्त्री थापाले त्यो असमानता हटाउन आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । यसअघि आजै बिहान गृहमन्त्री थापाले नक्खु कारागार, महानगरीय प्रहरी परिषर ललितपुर, जाउलाखेल, महानगरीय प्रहरी प्रभाग पुल्चोकको निरीक्षण गर्नुभएको थियो ।
प्रकाशित : बुधबार, चैत ०७, २०७४१२:१४
सिन्धुली जीप दुर्घटना : ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या ५ पुग्यो ! [मृत्युहुनेहरुको नामावली सहित]
जिप सडकबाट अन्दाजी ३०० मिटर तल खस्दा जिप धनीको घटनास्थलमै मृत्यु !
दाङमा बस सडकबाट ६/७ सय मिटर तल खस्दा ९ जनाको मृत्यु !
एक्कासी डोजर चल्दा फिर्के खोलामा खसेर पत्रकारसहित ५ जना घाईते !